Nezvedu - Suqian Teng'an Nyowani Zvekuvakisa Co., Ltd.
Suqian Teng'an Nyowani Zvekuvakira Co., Ltd.i bhizinesi remazuva ano rinotungamira mukugadzirwa uye kutengesa kwealuminium poda. Iko zvino ine yekutanga-kirasi yekugadzira michina uye epamberi yekuyedza zviridzwa, uye inoshanda pamwe nesainzi uye hunyanzvi hwekugadzira tekinoroji uye mamwe maitiro ehunyanzvi mauto ekugadzira aluminium poda indasitiri Makambani anozivikanwa.
Iyo fekitori inonyanya kuburitsa: mvura-yakavakirwa aruminiyamu poda poda (GLS-70, GLS-65), iine kugadzirwa kwegore matani zviuru gumi. Izvo zvigadzirwa zvinogadzirwa mukuomerera zvinoenderana nezvinodiwa nePeople's Republic of China zvekuvakisa indasitiri zviyero, uye chigadzirwa chigadzirwa chinosangana nezvinodiwa ne "JC / T407-2008". Uye zvinoenderana nekusiyana kwakasiyana kwezvinhu zvakasvibirira zvemugadziri wega wega, chigadzirwa chemhando yacho chiri nyore uye izvo zvinodiwa zvehunyanzvi zvinotsanangurwa mu "JC / T407-2008".
Isu tine edu emhando yepamusoro manejimendi uye maitiro ekufemera timu.
Asingasviki maawa maviri pakubvunzwa kwega kwega maawa makumi maviri nemaviri pazuva mazuva makumi matatu nemakumi matatu nemashanu pagore
Kurumidza Kupindura; Professional Quotation; Kurumidza Kuendesa; Mhando yepamusoro; Assurance Yekutengesa.
Yakakwana mhando manageme
Yedu Kambani Sevhisi
Zvigadzirwa zvinogadzirwa nefekitori yedu zvakapfuura kuongororwa kwehunhu pamusoro pemakore, uye zvakaverengerwa senhengo yenhengo neChina Aerated Concrete Association, uye vakasimbisa kudyidzana kwenguva refu neiyo nyowani yezvinhu yemhepo yezvidhinha inogadzira. Hunhu, mukurumbira uye sevhisi ndiwo marongero efekitori yedu. Kubva pane manejimendi uye kutungamirirwa nehunyanzvi ndiko kutsvaga kwedu kwefekitori. Icho chinangwa chedu kupa vatengi zvigadzirwa zvemhando yepamusoro. Kusangana nevatengi zvinodiwa chivimbiso chedu. Ngatishandei pamwe chete kugadzira ramangwana riri nani.